Fedora 17 yakaburitswa zviri pamutemo | Kubva kuLinux
Fedora 17 yaburitswa zviri pamutemo
naPerseus | | GNU / Linux, Noticias
Pakupedzisira!!! Iyo yekumirira yapera, isu tatova nechiziviso chepamutemo chekutanga kweiyi nyowani vhezheni ye Fedora, iyo yakauya nekuvandudza kwakawanda uye nhau. Panyaya iyi, ndinokurudzira zvikuru kuverenga chinyorwa ichi: Yakanakisa Nyowani muFedora 17 nekuti haina marara chero (thanks to Jamin-Samueri nekubatanidza;)).
Dhawunirodha Fedora 17
Edza kushandisa zvinongedzo kuburikidza nerukova kudzivirira kuzadza maseva ekurodha;).
Kana mumwe munhu achifarira uye achiziva Chirungu: P, iwe unogona kuona inotevera vhidhiyo, yakaiswa nevakomana kubva kuFedora kwavanotaura nezve ichi chikuru kuburitswa:
Zvino kana hama, kurodha pasi kwataurwa;).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » GNU / Linux » Fedora 17 yaburitswa zviri pamutemo
Ini ndatova paFedora 17 (Beefy Chishamiso). : p
Makorokoto: D. Kwazisai mukoma;).
Ndatenda, ndiko kunakidzwa kwangu kweGNU / Linux uye ese mavhezheni ekare uye nharaunda dzedesktop dzakadai se: Fedora KDE, Fedora Gnome uye zvino Fedora XFCE vandishandira 100% uye ndosaka ndichiramba ndakatendeka kuna Fedora 🙂
PHEW !! Isa zvese zvakakosha, ikozvino wave kuenda kunakidzwa naFedora 17 neXFCE: p
Yakakura - kuidzikisa. Pane rangu Fedora 16 netbook neXFCE kuenda fancy, ini ndanga ndichitarisira kuburitswa kwaFedora 17.
Zvinofadza kukuona iwe zvakare pano shamwari, kwaziso uye nekutenda nekupindura :).
Manheru akanaka Mr. Blogger
Manheru ano ndine mibvunzo yakati wandei yandinovimba haina kukunetsa, yekutanga ndeinotevera, mumawindo kana uchinyora FN + museve chidzitiro chakadzora kupenya kana kuwedzera ipso facto asi mu fedora hazviitike kunze kwekunge ndatanga futi, zvisinei izvi Kugadziriswa kuri kurasikirwa kana kuvhara pasi izvi zvinogona kugadziriswa? sei?
Mubvunzo wechipiri ndouyu
MuGnome-mabhokisi iyo url sarudzo inobuda, ndeyei? kana zvinoita here kuti kana isu tiine windows mune imwe partition tinogona kuitangisa kubva kune gnome-mabhokisi sekunge anga ari chaiwo?
Yangu Hardware ndeye acer inoshuva 4750 yakakosha 5. 6 ram uye Intel 3000 mifananidzo
Zvakadii naAlberto, iro dambudziko nemakiyi e fn + (x kiyi) palaptop yako inogona kugadziriswa nekugadzirisa iyo Xorg.conf faira (pamwe pane imwe nzira), nekugadzirisa iri faira raizobvumira kuremekedza shanduko iyi zvachose, iyo ndiko kuti, shanduko dzaisazorasika kana uchitangazve kana kuvhara komputa. Zvino, mubvunzo wangu unotevera, ndiro chete dambudziko rauinaro pakombuta yako? Semuenzaniso, mune dzimwe nguva iyo touchpad haishande nemazvo mukuparadzira kwakasiyana (zvakaitika kwandiri), nezvimwe.
Kana ari gnome-mabhokisi, iko kunyorera kunokubvumidza kuti ushandise masisitimu anoshanda munharaunda (yawakaisa kuburikidza nemabhokisi emazino) kana kure (ndiko kuti, kuwana muchina chaiwo uri pane imwe komputa, kuburikidza neinternet kana yemuno network), zvinogona kunzi ndeimwe nzira kune Virtual Bhokisi. Saka ndine urombo kukuudza kuti haugone kumhanyisa Windows (iri pane chimwe chikamu chako) kubva pano :)
PS: Ini ndakakanganwa kuwedzera izvo chaizvo izvo kuti pane iyo url sarudzo mune gnome-mabhokisi, kuti iwe ugone kuisa iyo url kana IP kero yekombuta iri kure uko iko chaiko muchina uripo.
@Alberto: Zvekudzivirira kwekudzivirira makiyi iwe unofanirwa kugadzirisa iyo / etc / default / grub faira mune midzi modhi. Mariri iwe unowana iyi mitsara:
GRUB_DISTRIBUTOR = "Fedora"
GRUB_DEFAULT = yakachengetedzwa
GRUB_CMDLINE_LINUX = "rd.md = 0 rd.lvm = 0 rd.dm = 0 chinyararire SYSFONT = latarcyrheb-sun16 rhgb rd.luks = 0 CHINOKOSHA = en LANG = en_ES.UTF-8
Iwe unofanirwa kuwedzera paramende mumutsara "GRUB_CMDLINE_LINUX ="
Saka zvinoita seizvi:
GRUB_CMDLINE_LINUX = "rd.md = 0 rd.lvm = 0 rd.dm = 0 chinyararire acpi_backlight = mutengesi SYSFONT = latarcyrheb-sun16 rhgb rd.luks = 0 ZVINOKOSHA = en LANG = en_ES.
Sevha uyezve muTerminal, gara semidzi, gadziridza Grub nemurairo uyu:
grub2-mkconfig -o / boot/grub2/grub.cfg
Tangazve uye enda.
Juan Carlos mhinduro yacho yakakwana, zvakadaro ini ndine mubvunzo uyo iwe kana Perseus unogona kupindura kana uchida
Nei kana nei iri iyo system isingamise basa iri otomatiki?
Ndatenda nerubatsiro icho chiri chinhu chakanaka nezve nharaunda yevashandisi vemahara software iyo munhu wese akagadzirira kubatsira
@ albert345: Haasi ese mabhuku ekunyorera uye emabhuku ane zvakafanana control kiyi mubatanidzwa. Sekuziva kwangu, mhinduro yandakupa haishande pamalaptop ese, inoshanda paAcer, Samsung uye ndinofunga Lenovo zvakare. Ndine shamwari inoshandisa HP, uye pane iyoyo haishande.
Pane chero munhu anoziva kana ichigona kuvandudzwa kubva gumi neshanu?
Zvichida chinyorwa ichi chinogona kukubatsira hama: https://blog.desdelinux.net/how-to-actualizar-a-la-nueva-version-de-fedora-con-preupgrade/ ;).
Perseo ya bootie Fedora 17 ... mashandiro ainoita neterminal ndeyeGreat ... pachokwadi ndakaita zvinhu zvandisati ndamboita xD axis uye ini ndakadzidza ^ _ ^
Chinhu chega chandisina kunzwisisa ndeye isingazivikanwe pasuru maneja iyo ine default: Ehe, ini handizive maitiro ekuisa mapurogiramu ... handizive kana iri kuburikidza netemu kana kuti iri kuburikidza neiyo package package .. zvakadaro ... ini handizive maitiro ekuisa zvinhu kuna Fedora ahahaha (ndinoda kudzidza)
Ziva kuti iyo kernel vhezheni ndeye 3.3.7 (zvisingaite) .. Ini ndinofunga ndiyo yepamusoro kusvika pari zvino .. yakatokwira kupfuura Debian ine .. kana asiri munhu anonditsiura
Iwe unogona here kutumira post maitiro ekuisa mafomu muFedora?
oh uye sechipo ... tsanangura maitiro ekuisa Elementary icons theme uye zvakare "msttcore-fonts" ayo ari Microsoft Ejeje mafonti
sudo yum kutsvaga zita kutsvaga
sudo yum kuisa zitaoftainstall
Ndichaedza anibal ... maita henyu!
Unogona kuzviita zvakananga kubva kumagumo kana nePackageKit application maneja (Gnome, LXDE, XFCE) kana Apper (KDE).
Iyo mini expression gwara rekuisa pane Fedora:
sudo yum search nombre del programa
Tsvaga zvese zvine chekuita ne:
sudo yum search all nombre del programa
sudo yum install nombre del programa
sudo yum remove nombre del programa
sudo inoshandiswa panguva yakaiswa ... sezvo ini ndichiri muLive mode ini ndakangoisa yum ..
asi izvozvi ndiri kuenda kunoedza kana mafomu andinoda awanikwa.
Zvinotaridza sezviri nyore kwandiri nenzira iyi ne terminal pane nePakejiKit .. icho chinhu hachinzwisisike
mmm… pamwe haungawane zvakawanda kusvikira waisa iyo RPM Fusion repo, Fedora ine 100% yemahara software kubva kufekitori;).
ahhhhhhhhhhhhh…. zvakanaka ndicho chimwe chinhu…. tsime, ndanga ndisingazive ...
kurodha pasi iyo dvd ipapo xD
jamin-samuel sezvo Sudo yakaremara nekumisikidza kuti iite it tevera iyi posvo:
Ini ndainyanya kufarira iro gwara nekuti iwe unoimisikidza neiro kamwe, nyore nyore kuraira.
Mune yangu kesi yakagadziriswa nekusarudzika;). Zvakanakisa pane zvese ndezvekuti Red Hat yatove patched kushushikana kwaivapo neSudo, saka, kunyangwe zvisingakurudzirwe zvakanyanya, zvirinani zvakachengeteka kuishandisa :).
@Perseo hehehe kuti dai ndanga ndisingazive, ndeyekuti fedora 16 yakanga yakaremara zvakadaro ndakangotora pasi fedora 17 ine kde uye ndichaona kunaka kwedistro.
Fedora inogara iri kumusoro kusvika parizvino kupfuura Debian 😉
Huuuuu ndichaedza asi handizvifarire ... Kwaziwai ...
Ehe hongu, kwandiri zvirinani kushandisa iyo terminal sezvo iyo package kit haina basa kwandiri (ndicho chinhu choga chandakataura kuna fedora 😛) kutarisa sarudzo mune udzamu hweyum ingo nyora «yum» uye icha ratidza sarudzo dzese dzinokwanisika, sekumifananidzo yekutanga iwe yaunofanirwa kutaipa:
yum kuisa yekutanga-icon-theme
sezvo iri mune zvekuchengetedza uye msttcorefonts iwe unofanirwa kutsvaga iyo .rpm package painternet, kungo typer mugoogle kwakwana 😉
Iyo kernel mu arch iri pa3.3.7-1 kweanopfuura mavhiki matatu kana zvakadaro, kungoziva ruzivo, heeee?
Iyi vhezheni iwe yaunogona kushandisa Gnome 3 isina giraidhi yekumhanyisa?
Ndizvozvo, ndakaishandisa kwechinguva nevatyairi vemahara uye zvaive zvisina kushata zvachose, kungo lag zvishoma nguva nenguva.
Aaaaahhhhhh !!!!!… .maitiro andakarasa nzira iyi kumhanya mumuchina wangu… kugehena Ubuntu zvisinei kuti yakawanda sei LTS. Hazvibatsiri, kana iwe uchikura uine distro unogara uchidzokera kune izvozvi.
Ini ndakati iyo yakanakisa yaive F-16, asi iyo 17 inotyisa. Uye, Perseus, iyi imhosva yako yese….
Aaaaahhhhhh !!!! kupotsa kwandakaita iyi spidhi pamushini wangu. Kugehena neUbuntu zvisinei kuti LTS iri sei. Uye ini ndakati Fedora 16 ndiyo yaive yakanakisa, asi F-17 inotyisa.
Ndakawira mukuyedzwa, vice zvakare, uye shamwari Perseus, chikamu chemhosho ndechako ... hehe
AJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA O / O / \_ O /
Ndinoiisa husiku ... Ndichiri kurodha pasi DVD
munguva pfupi ndiri kuenda kubhururuka zvakare xD
XD zvakanaka zvakagovaniswa bro XD.
Ndine dambudziko rimwe chete randisingakwanise kugadzirisa. Ini handizive kuti nei Evince achingondipfura uye achitsvaga kushanda ne .xps mafaera. Ini ndinotora processor yacho ku100% uye tembiricha kuenda ku80º.
Panguva yacho, ndakasarudza kusunungura Evince uye ndakaisa Xpdf pachinzvimbo, ndichaona zvinoitika.
Wow, zvinoshamisa sei !!! Wakaisa here kubva kuRarama kana kubva kuDVD? Vhura kuti uone kuti sei, ini ndakaisa Live kubva kuRC1 uye ini handina kumboburitsa chero dambudziko parizvino. Ndiri kushandisa Gnome, ini handizive kana newe uri.
Kubva kuRarama, iyo DVD rukova yanga ichinonoka kurodha mangwanani ano, uye ndinoshandisawo Gnome. Ndiri kutsvaga nzira yakatenderedza, nekuti Xpdf ishoma.
Zvakanaka ndiri kurodha DVD kuti ndidzivise zvinhu zvisinganzwisisike.
Ini ndiri pakati nepakati "padanho rekukunda xD" asi ndine chivimbo uye ndakadzikama 😛 ndinosiya.
Ini ndinopenga kutanga kuishandisa ..
Zvakanaka, izvi kupenga, asi ndiFedora uye ndizvo zvinhu zvinowanzoitika. Zvinoitika kuti ndakatanga kuongorora zvandakaita Evince asati andikonzera dambudziko iro, uye ndakaona kuti zvakatanga mushure mekunge ndaisa purinda ...?. Kunobuda ndaiisa asi ndakanga ndisati ndamboita kudhinda. Kune zvese izvi ndanga ndatoburitsa Evince.
Ini ndakadhinda akati wandei zvinhu zvandaive ndakamirira, ndobva ndazvidzorera kuti ndione kana yawana iko kukanganisa, uye oh kushamisika! hazvichaitike ... Izvo zvinoonekwa kuti chimwe chinhu chaive chakamirira mushure mekumisikidzwa kweprinta, zvichikonzera Evince kugadzira faira reXPS uye kwete kumisa "kuitisa". Aive akandimirira kuti ndiite test print? Ini handina kana zano, inguva yekutanga chimwe chinhu chakadai kuitika kwandiri.
Zvakanaka, kana zvikaitika kune chero munhu, iwe unoziva zvazviri.
Wow ndatenda @Jan Carlos nechidimbu;).
Isa epdfview. =)
Tigashire zvakare…! Fedora 17…! Zvakanaka…!
Ini ndinoti kuna mukoma wangu, tarisa, fedora 17 yabuda! Iye anondiudza, iwe unoshandura more distro kupfuura bhurugwa.
Pane chero munhu akakwidziridzwa kubva mushanduro 16? wakaisa kubva pakutanga kana kuti wakazviita sei?
Vakazviita nedzidziso iyi kana pane nzira iri nyore uye inokurumidza?
Pane script inonzi 'Fedora Utils' iyo inokutendera iwe kuti uise yakawanda software uine mashoma mabhatani iwe kusarudza izvo zvaunoda kuisa, macodec eodhiyo nevhidhiyo, masosi, uye yakawanda software> http://fedorautils.sourceforge.net/ ***** Heino mufananidzo> http://www.zimagez.com/zimage/screenshot-05302012-104657pm.php ***** Ndinovimba zvinokubatsira zvakanyanya! 🙂
Ini pachangu ndakaisa Fedora 17 kubva pakutanga. 🙂
gadza Fedora 17, inoenda yakanakisa uye nekukurumidza. (Gnome)
Uyezve isa Java 7, asi haiuyi nejaacac. Pane chero munhu anoziva kuisa java jdk, handireve kuti Java-1.7.0-openjdk, asi iyo inouya nemutemo wejaacac 😀
Fedora 17 tsvuku
uye zvakanyanya neiyo Fedora kana Echo mifananidzo pamwe neCinnamon uye mamwe ma tweaks 🙂
Ini ndiri mumwe wevaya vanofunga kuti paunotanga nechimwe chinhu unofanira kuchipedzisa kana kuti kumbofambira mberi usati waedza kuita zvimwe zvinhu, ini ndiri mushandisi akatendeka weDebian uye chero chinhu chiri cheiyo tambo inoita seyakanaka uye inogamuchirwa kwandiri ruremekedzo rwandinarwo rwekugoverwa uye zvabuda zvandakaona.
Asi urikundifambisa kuti ndiedze chimwe chinhu icho kunyangwe musimboti ndakaramba kudzokorora kugadzikana uye mashandiro aDebian, asi ini ndinofunga iyo nguva iri kuswedera iko kure nezvandakatanga, ini ndichawedzera chimwe chinhu, nekuti iyo RH / Fedora vanhu zvakare vane nzvimbo munzvimbo yekugadzikana uye mashandiro uye handigone kuibvisa mumusoro mangu.
Mushure meiyi mharidzo diki, ini ndichawedzera rimwe basa kune iyo rondedzero yakamirira mune yeGnu / Linux zvakasikwa.
Zvese zviri pamusoro = ini ndichazviisa
Nditende, Fedora yakanyatsogadzikana, asi panguva imwe chete ine hunyanzvi uye yakagadziridzwa, muchokwadi iyo yekuvandudza kutenderera yakafanana neDebian uye kunyangwe ivo vane huzivi hwakafanana, heino iyo Debian yekuvandudza kutenderera ichienzaniswa neiyo yaFedora:
Yakagadzikana = Yekupedzisira Fedora
kuyedza = Fedora kuyedza (alpha / beta)
kusagadzikana = Randhide
Sezvauri kuona kuti haina kunyatsosiyana, chete apa Fedora ine yakagadziridzwa uye yakaedzwa mapakeji, ndinovimba unoifarira uye kana iwe uchida chimwe chinhu chakaita seGnome 2 asi muGnome 3 ini ndinokurudzira Cinnamon; shamwari yedu Perseus yakanyora maitiro ekuiisa ipo pano: https://blog.desdelinux.net/how-to-fedora-instalar-cinnamon-como-alternativa-a-gnome-shell/ kana unogona kushandisa KDE kana XFCE 🙂 Ndinovimba unoifarira uye unoona kuti Fedora naDebian havana kunyatsosiyana kunze kwemapakeji avo 🙂
Ndinofunga sewe! Ini ndinoshandisa fedora nekuti zvinoita senge yakagadzikana kwazvo distro, uye pamusoro pezvose zvakagadziridzwa.
Ini ndanga ndichitsvaga rakazara rom (mune madhiraivha) senge ubuntu, asi rakadzikama senge debian (ubuntu hairatidzike kunge yakatsiga zvachose, iine akati wandei mienzaniso uye bvunzo).
Uye muFedora 16 ini ndakaona izvozvo, 100% kugadzikana uye zvakare gnome shell yandinoda uye ese matsva uye akaedzwa mapakeji.
Iwe haugone kuenzanisa Debian naFedora uye nyora kuti vane huzivi hwakafanana. Kuedzwa kweDebian kwakagadzikana sekupedzisira Fedora (pamwe zvakanyanya kudaro). Fedora anozvipira kugadzikana kuti ape hunyanzvi.
kuyedza, kugadzikana uye kuwanda kwazvino zvakare
ndisingade kupinda mumatambudziko erusaruraganda, asi ini ndiri mutengesi pamusoro pezvose ... ini handina kana mukana kuona mukomana mutema mumwechete mumifananidzo yeiyo Fedora portal, kwete imwe, ese machena, epingi uye akagwinya asi kwete dema rimwe ... ¬¬
Juan Carlos Ndeupi mufananidzo ... ndizvo?
Iwo maArabu, uye kune maLatinos zvakare, asi hapana chero vatema veAfro-vazukuru ... Kana iwe uchireva kuti anoshamisa ari pakati, anogona kunge ari Shang Shung pakupedzisira :)
Mufananidzo wekavha, mutsara wechitatu, wechipiri kubva kurudyi kuruboshwe; mutsara wechinomwe, wechipiri kubva kuruboshwe kuenda kurudyi; kana izvo zvichena nepingi, ndiri Marie Antoinette …… Uye ndichitarisa padumbu rangu, ndinogona kukuvimbisa kuti handitombotarisane zvakafanana.
Perseus arikuedza kwazvo kugonesa vanhu kuti vashandise iro rakakura uye rine mukurumbira distro iro Fedora, asi kune vashandisi veLinux vasina kugutsikana naFedora, izvo zviripo, ndinokurudzira Archlinux: yakagadzikana (ndanga ndiri gore ndichiishandisa uye Ini handina kumbove nematambudziko), yakagadziridzwa uye inogadziriswa senge hapana imwe.
Ini ndatova neSpin LXDE mumaoko angu, Kana ndawana nguva ndichaiisa ndoyedza zvirinani. Chengetedza iyo Fedora post, Perseus!
Ini ndinoshandisa Kubuntu 12.04 uye ndinoiona yakagadzikana.
Ini ndinongoona akawanda .deb mapakeji kupfuura .rpm
Iyo Fedorian bombardment iri kutora toll pane yako braincase ;-). Ndinokuraira jekiseni: Isa Fedora nekukurumidza sezvazvinogona
Kungoti ini ndinozviona zvishoma zvishoma ????
Asi ngatione kuti inoita sei mumaawa mashoma, kana isina kuvhurikaSUSE 😀
Nooo ndinoifarira 🙁
Kudzokera kubuntu pamwe ne arch 😀
Just nekuda kwekuda kuziva, ndeipi vhezheni kana kutenderera kweFedora iwe yawakaedza?
@ kik1n, watobayiwa kare.
@Perseo, unofanira kunge wakashandisa iyo KDE edition.
Dhawunirodha zvese DVD 32 (PAE) uye 64.
Kuisirwa kunotora 30 min.
Haisi kunyatsotsetsenura ne KDE.
Kubuntu kana Arch yakaiswa 32 (pae):
(K) 10 kusvika 15 min yakaiswa.
Arch (base) 6 min (maximum), Arch + K ye10 min 😀
(K, A) Inokurumidza uye inonaya.
Fedora 16 yaikurumidza pane yangu laptop uye pane desktop neF17 pfff turtle.
Kubuntu + Arch 😀
Perseus, ndinokukorokotedza nemipiro yako, nekuda kwevanhu vakaita semi. iyi blog yakakosha.
Tinoita nemufaro shamwari :).
Kutenda nekumira nekutora nguva yekupindura;).
Ndingaite sei kuti iyo Arial font ishandise muGoogle chrome ndiri mu fedora?
isa pasuru inonzi "msttcore-fonts" .. Ini ndinogona kuvhura libreoffice uye ndosarudza ariari tsamba pasina matambudziko
asi mubrowser ini ndinosarudza arial mukugadzirisa mafonti uye hapana chinoitika: /
mumwe munhu akandiudza kuti ndiise mafonti asingagumi kugadzirisa matambudziko ekupa font kuGoogle chrome.
uye vakandipa iyi link
ndiudze .. izvi zvinogona kugadzirisa dambudziko rangu here?
Zvakadii hama, ini ndinoisa maMicrosoft mafonti seizvi:
Mushure mekunge script yapedza kuisa iwo mafonti, inokumbira iwe kuti utangezve sisitimu, reboot. Mune yangu kesi, mafonti akagadziriswa nekusarudzika muchromium, ini ndaisafanirwa kuita chero chinhu zvachose ¬.¬
Ndinovimba izvi zvinobatsira;).
jamin-samuel, ini handikurudzire kuisa mafonti eMicrosoft nekuti akagadzirira iyo Windows inopa injini, mhando yemafonti inobatwa nedesktop, kwete iyo distro, mune yako Gnome uye inouya naCantarell yakatsanangurwa, inova sarudzo iri nani pane mafonti eWindows, kana uchida kuisa Arial, shandisa Liberation, Dejavu kana Droid iyo inokupa iwe zvirinani mhedzisiro.
Chorme inouya neyekutanga-setwa mafonti ane font uye yakatarwa saizi, kuti uashandure iwe enda ku «Kuisa / Pasi pehood» mu «Webhu Zvemukati» sarudzo dzauine «Fonti saizi» ipapo iwe unoshandura zvese.
Ongorora: Kuti uvandudze mafonti muGnome iwe unoisa iyo gnome-tweak-chishandiso uye mune yesarudzo mafonti iwe aunoshandura zvinoenderana neyako yekutarisa;
Kana iwe uine tarisiro CTR (iwo makwere)
Kana uine LCD, Flat kana Led Monitor
Hinting's Yakazara sarudzo inogoneswa kana iwe uine yakanaka vhidhiyo kadhi. Nezve izvi ini ndinonatsiridza kwazvo kupihwa kwesosi. :)
jasmin-samuel haakurudzirwe kuisa mafonti eMicrosoft, sezvo vakagadzirira kushanda neinjini yekupa Windows, mune ino Gnome, iyo inouya naCantarell. Kana iwe uchida kuisa Arial shandisa Liberation, Dejavu kana Droid iyo inokupa iwe zvirinani mhedzisiro.
Chinja iyo Chrome font mu "Kuisa / Pasi peiyo Hood: muchikamu che" Webhu Zvemukati "sarudza gadzirisa uye wovagadzirisa sezvaunoda.
Ongorora: Hunhu hwemafaira hunobatwa nedesktop, kwete iyo distro, muGnome unoimisa iyo nekuisa "gnome-tweak-chishandiso" mune iyo Fonti sarudzo.
Nezve CTR yekutarisa (yemakwere)
Kune LCD, Flat kana Led
Iyo Yakazara Antialiasing sarudzo inoshandiswa nemakadhi ane simba evhidhiyo 🙂
offtopic zvakare yakabuda zambuko linux kune avo vanoda nyore arch.
Ini ndotobva kuFedora (@ _ @)… ahahahajajajajaj
zvinoshamisa .. 😀
kuisa kubva kuDVD kune mbiri .. zvese zvinorwadza pambongoro xD
zvinotora iwe kwenguva yakareba kugadzirisa iyo system kana yaiswa uye yakagadziridzwa.
zvese apa zvakanakisa 😀
Chandinoda kuisa zvimwe zvinhu ... chinhu chisingazivikanwe chete ndechekuti ini ndinoisa skype .rpm kuti ndinoitora kubva papeji uye inoisa nemazvo asi pandinoiita inondiudza kuti haigoni kuwana dhairekitori.
Perseus, ndatenda neiyi yakanaka posvo uye ndinovimba munguva pfupi kuti tibatsirane pamaitiro ekuFedora
Chokwadi bro, pese paunoda: D.
Well I loved muuuuuuuuuuchisimooooooooo have installed fedora 17 ... phew ndainzwa kunge ndichiri fresh mukirasi xD ndinonzwa ndadzidzawo ..
asi ndiri akatendeseka neni .. Ini handigone kuchinja iyo distro kungo yatsva vhezheni yekernel (iyo inogona kunyatso kuiswa kunze kweUbuntu 12.04) ..
Ini abmiro zvakanyanya zviri kuitwa nevakomana vefedora
asi chokwadi ndecheichi "Ndiri kusununguka kushanda pa ubuntu xD" ejehehehe
Ndinoita uye ndinoshandura chero zvandinoda "nekuti ini ndatoziva system kwazvo" asi mu fedora ndiri kudzidza kubva pakutanga ...
Ini ndinofunga zvandinoronga kuita kuve ne ubuntu 12.04 yakaiswa ne fedora 17 kuti isadzime kudzidza kwe fedora 🙂
@Perseo Ndatenda nekukurudzira kwakanyanya kwe fedora 😀 😀
Ndatenda shamwari, izvi hazvisi kuzopera pano, ini ndichaenderera mberi ndichitaura nezvaFedora, ndine zvinyorwa zvinonakidza mupombi;).
gadzirira! Unogona kuvaburitsa pese paunoda 😉
Jamin Samuel sezviri pachena waifadzwa nefedora 17 uye uine mbiri-bhutsu kurira kusinganzwisisike, asi, sezvo iwe uchiti urikudzidza kubva pakutanga ini ndoda kukubatsira nekukupfuudza iwe post-yekumisikidza gwara yandakazvibatanidza (ndinoti unganai nekuti irworwo ruzivo rwunowanikwa kubva kune mamwe masaiti kuburikidza neXD zvinongedzo) pandakatanga kushandisa fedora 16, gwara ndere gumi nematanhatu asi handifunge kuti pane musiyano mukuru ne16 kunze kwegwara rekushandisa linux: P, heino nhungamiro
Nenzira, heino chinyorwa chakanaka nezve maitiro ekuisa kernel 3.4 mu ubuntu 12.04
chokwadi iwe unogona kunyora nezve izvi zvinobuda pano
Zvakanaka, ndanga ndichiiyedza kubva nezuro husiku. Ndinofanira kureurura kuti ndaive ndakanyarara nezveGnome 3, asi chokwadi hachina kuipa zvachose. Ini ndakakwanisa kuimisa uye kugadzirisa zvinhu zvekutanga zvechitarisiko, uye ini ndinoda nyaya yacho. Ndinoona kuti izvo zvinowedzerwa zvinopa sisitimu kunonoka uye zvinoita kuti zvese zvive nyore parutivi, ndinoona Fedora, panguva ino, akatsiga uye nekukurumidza.
Zvakanaka, iwe waigara wafunga kuzviedza XD. Ini zvakare ndachinjira kuGnome uye ini ndave kutanga kuifarira, handidi mapulagi zvakanyanya asi ndinofungidzira ndichafanirwa kuzviedza 😛
ndakagadzirira, ndinofunga ini ndatochinja mushandisi mushandisi !!!!
Makorokoto 😀 😀
Ndatenda zvikuru mumwe wako !!!
Huru, nenzira nzira diki tutori pane zvekuita mushure mekuisa F17 yakanyorwa nasahwira Manuel Escudero anobva kuMexico City pane yepamutemo blog yeXenode masisitimu eMexico: http://xenodesystems.blogspot.mx/2012/05/que-hacer-despues-de-instalar-fedora-17.html Ndinovimba unozvifarira
Perseus, iwe uri sei?
Ndine dambudziko, handikwanise kupindura kumhinduro kubva kuna jamin, ndinoita zvese zvakajairika, ndinodzvanya kutumira uye hazvioneke.
Mhoroi vakomana, dambudziko rangu rinonyanya kuve iro rajaira, nekuti pakuvhura peji ine flash zvemukati iyo "firefox" inovhara nekukasira uye iyo "opera" inosiya nzvimbo iri grey paive nemwenje yezvinhu, zvinoshatirisa uye handinyatso don ' t kuziva nekuti kusashanda uku kunoitika, ndinoda kuti mundibatsire kadhi rangu revhidhiyo iri "yepamusoro-soro" intel (isu tese tinoziva, kuti iwo makadhi akanyanya kuipa kupfuura iyo fuck) yangu yegondobvu ndangariro ndeye 4Gb uye processor yangu ndeye zvinosiririsa intel musimboti 2 vaviri. Kubva pane yangu ruzivo rweLinux ndinoda kunzwisisa kuti kunetsana kunoitwa pakati pechiedza nekadhi rangu revhidhiyo. Ndatenda kwazvo pamberi pedu 🙂
Ehe, zvese zvinoita kunge zvinoratidza kuti une dambudziko neiyo hardware yekumhanyisa ficha ye flash. Wakamboedza here yekare vhezheni ye flash? Ndeupi kugovera uye rudzii rwekuvaka hwauinaro (i386, i686, x86_64)?
Imwe sarudzo ingave yekubvisa flash uye kushandisa Chrome sezvo iine plugin yakaiswa nekusarudzika.
Kana ini ndakatoedza yapfuura vhezheni uye ichipa iyo yakafanana kukanganisa. Maumbirwo andinoshandisa x86_64 ... uye zvinofanirwa kucherechedzwa kuti NDINOVENGA Chrome nemidziyo yayo nemoyo wangu wese, kupfuura chero chinhu nekuti dzakasimba kwazvo, pamwe dzichikurumidza asi dzakanyanya kusimba
jenrry soto dexter akadaro
Mhoro shamwari, kwaziso kunharaunda yese, munoziva ndakagadza fedora 17 ine kde uye zvese zvinhu zvakanaka, asi handikwanise kudzora kupenya kwescreen neiyo fn + f5 uye f6 kiyi ndeye sony vaio modhi VPCEK amd chiratidzo e2 na ati radeon hd uye ndatoedza zvese zvandinowana pane mamwe mapeji asi pasina budiriro uye ndinoisawo screen kuti rive rima, ngatitii mumaminetsi gumi asi hapana chinoitika, tevera chidzitiro pakunyatso kupenya, ndapota kana paine munhu anogona kundibatsira, ndatenda kukwazisa kubva kuLima Peru
Pindura kuna jenrry soto dextre
Osbin martinez akadaro
Shamwari, ini ndaive nematambudziko nekupenya kwescreen, zvaityisa kushanda nekupenya kwakanyanya nguva dzese, ndinotenda mhinduro yaJuan Carlos yandinokuyeuchidza pazasi:
«@Alberto: Zvekujeka kwekudzivirira makiyi iwe unofanirwa kugadzirisa iyo / etc / default / grub Faira mune mudzi modhi. Mariri iwe unowana iyi mitsara:
Pindura kuna Osbin Martinez
jenrry soto akadaro
Mhoro Fedora 17 shamwari dzaunoziva, ini ndakaisa feedora pane yangu sony vaio VPCEK laptop uye ndaisambogona kugadzirisa kupenya kwescreen, ndakatevera maforamu mazhinji zvakare iyo inotaura pano asi haina kundishandira uye saka ndakasuwa ndakatsvaga kumwe kugovera uye kuisa KUBUNTU 12.04
Pindura kuna jenrry soto
Zvakanaka, sekukuudza kwandaiita, ndakaisa Kubuntu 12.04 uye mushure mekuvandudza maawa mashoma ndakaitangazve uye zvese zvinondishandira.Ndinovimba iyo fedora inosanganisira zvakavanzika madhiraivho kubvira neizvozvo kana uchikwanisa kudzora kupenya kwechidzitiro, wifi zvikanganiso, Ndinovimba kuti rimwe zuva fedora ichave otomatiki mushe ndinovimba vamwe venyu ndokumbira mundizivise kana fedora inotsigira screen kupenya yabuda sezvo yangu laptop iri sony vaio VPCEK ine ati radeon hd
Ini ndauya pano kuyedza kutsvaga mhinduro yandinofungidzira kuti ine chekuita nekumhanyisa kwemahara. Dambudziko guru randiinaro naFedora 17 uye virtualbox nderekuti ndinoedza kuisa windows 8 asi zvinondikumbira kuti ndiite kumhanyisa Hardware pamwe nekuyedza kumisikidza mutambo mumuchina chaiwo nedambudziko rakafanana. Maitiro ekumisikidza izvi, muBIOS yangu yakavhurwa, kare mukumisikidzwa kwekare ini ndakanga ndisina dambudziko iri (Windows 7 uye Ubuntu 12.04).
Yangu PC ndeye VAIO ine pentium mukati me4 ye 64-bit RAM
Mune virtualbox pandinopinda kumisikidza uyezve sisitimu iyo "Yekukurumidza" tebhu yakaremara. Handizive zvekuita.
Kernel 3.4 yave kuwanikwa
Ubuntu Builder: maitiro ekuvaka tsika shanduro dzeUbuntu